၂၀၂၁ ဧပြီလ ရောက်ရင် မြန်မာပြည် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်မယ် ဆိုတာ တကယ်လား? (ကာကွယ်ဆေး တွေ ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ) – GaMone Media
၂၀၂၁ ဧပြီလ ရောက်ရင် မြန်မာပြည် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်မယ် ဆိုတာ တကယ်လား? (ကာကွယ်ဆေး တွေ ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ)
ကာကွယ်ဆေးသတင်းတွေက အားရစရာကြီး.. COVAX ကနေ ၂၀ % ရမယ်ဆိုတာကြီးကို အရင် ပြောရအောင် COVAX မှာ နိုင်ငံ ၁၈၀ ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထွက်လာရင် နိုင်ငံ ၁၈၀ ကို ခွဲတမ်းနဲ့ မျှပေးရမှာ။ လက်ရှိအကြီးဆုံးပြဿနာက COVAX ကိုယ်တိုင်က ဘယ်ကဆေးမှ မဝယ်ရသေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ခွင့်ပြချက်ရတဲ့ ကာကွယ်ဆေး မရှိသေးလို့။
လက်ရှိ pfizer ဆေးတွေက နိုင်ငံကြီးတွေက အရေးပေါ်အနေနဲ့ ခွင့်ပြုပြီး အမြန် ထိုးနေတာ။ လုံးဝ စိတ်ချရတဲ့ အဆင့်မရှိသေးဘူး။ မတော်တဆ ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ပြဿနာ တက်နိုင်သေးတယ် ဆိုတဲ့သဘော။ COVAX ကိုယ်တိုင်က ဘယ်ကဆေးမှ မဝယ်ရသေးဘဲ ၂၀ % ကို ဘယ်လိုသေချာလဲတော့ နားမ လည်ဘူးရယ်။
ဥပမာ အရင်စမ်းသပ်တုန်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူတွေမှာ အာရုံကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေ တက်တာရှိတယ်၊ ဒါမျိုး ပြဿနာ မတက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ သက်သေမျိုး မပြနိုင်ဘူးတဲ့။ ဒီတော့ ထုတ်လုပ်မှုလဲ မစသေးဘူး၊ စိတ်ချရတယ်ဆိုတာမျိုး မပြောနိုင်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်နေသေးတယ်။
Moderna ကတော့ ၂၀၂၁ ထဲမှာ US မှာထားတဲ့ အော်ဒါကိုပဲ ထုတ်နိုင်မယ်တဲ့။ အေးရော ကျန်တဲ့သူ ဘယ်သူမှ မရောင်းနိုင်သေးဘူး လိုချင်ရင် ၂၀၂၂ အစောဆုံးပဲဆိုတဲ့ သဘော။ Pfizer ကတော့ ထုတ်လုပ်မှုဘာညာ မပြောတော့ဘူး။ အနုတ် ၇၀ ဒီဂရီမှာထားရမယ်ဆိုတာနဲ့တင် ကိုယ်တွေနဲ့ ဝေးပြီရယ်။ မဝေးဘူး ဝယ်မယ်ဆိုလဲ ၂၀၂၁ မှာ မရနိုင်ဘူး။ ၂၀၂၂ မှာတောင် ဝယ်ထားပြီးသား တန်းစီဇယားနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။
ရုရှားက Sputnik V ကိုကြည့်မလား၊ ဒီနှစ်ကုန် သန်း ၃၀ ထုတ်နိုင်မယ်ဘာညာနဲ့ အခု ၅ သန်းတောင် မထွက်လို့ သူ့ဟာသူတိုင်ပတ်နေတုန်း။ အားကိုးစရာ တရုတ်ဆေး Sinopharm ပဲကျန်မလားပဲ။ ဒါလဲ ခုထိ မဝယ်ရသေးပါဘူး။ ၂၀၂၁ အကုန်မှာ သန်း ၆၀၀ ဈေးကွက်တင် ရောင်းမယ်ဆိုလား။ ဈေးရောင်းတယ်ဆိုတာ အရင်ဝယ်သူ အရင်ပေးမှာပဲ။ ဝိုင်းလုလို့တောင် လောက်မယ်မထင်ဘူး။
အိန္ဒိယက ဆေး ၁ ဘီလျံထုတ်မယ်ဆိုတာက Astrazeneca က approve ဖြစ်မှ ဆိုတော့ ထည့်ကိုမတွက်နဲ့အုံး။ ဘယ်နေမှန်း မသိသေးဘူးရယ်။
မြန်မာကဝယ်တာလား။ ခုထိဘယ်မှ မဝယ်ရသေးဘူး၊ ဝယ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ် လို့ပဲ ပြောသွားတာရယ်။ ပိုက်ဆံထုတ်ကြီးကိုင်ပြီး လိုက်ဝယ်နေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့ ဖိလစ်ပိုင်တို့တောင် လိုချင်သလောက် ဝယ်မရလို့ တိုင်ပတ်နေတယ် ကြားတယ်။ ၂၀ % ရမယ် ၄၀% ရမယ်ဆိုတာကြီး ပြောထားတဲ့သူတွေကို ဘုတ်အုတ်ကြီးနဲ့ မှတ်ထားလိုက်ကြ။
ကာကြယ္ေဆးသတင္းေတြက အားရစရာႀကီး.. COVAX ကေန ၂၀ % ရမယ္ဆိုတာႀကီးကို အရင္ ေျပာရေအာင္ COVAX မွာ ႏိုင္ငံ ၁၈၀ ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထြက္လာရင္ ႏိုင္ငံ ၁၈၀ ကို ခြဲတမ္းနဲ႔ မွ်ေပးရမွာ။ လက္ရွိအႀကီးဆုံးျပႆနာက COVAX ကိုယ္တိုင္က ဘယ္ကေဆးမွ မဝယ္ရေသးဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ခြင့္ျပခ်က္ရတဲ့ ကာကြယ္ေဆး မရွိေသးလို႔။
လက္ရွိ pfizer ေဆးေတြက ႏိုင္ငံႀကီးေတြက အေရးေပၚအေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳၿပီး အျမန္ ထိုးေနတာ။ လုံးဝ စိတ္ခ်ရတဲ့ အဆင့္မရွိေသးဘူး။ မေတာ္တဆ ကာကြယ္ေဆးထိုးလို႔ ျပႆနာ တက္ႏိုင္ေသးတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာ။ COVAX ကိုယ္တိုင္က ဘယ္ကေဆးမွ မဝယ္ရေသးဘဲ ၂၀ % ကို ဘယ္လိုေသခ်ာလဲေတာ့ နားမ လည္ဘူးရယ္။
ဥပမာ အရင္စမ္းသပ္တုန္းက ကာကြယ္ေဆးထိုးထားတဲ့သူေတြမွာ အာ႐ုံေၾကာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ျပႆနာေတြ တက္တာရွိတယ္၊ ဒါမ်ိဳး ျပႆနာ မတက္ေတာ့ပါဘူးဆိုတဲ့ သက္ေသမ်ိဳး မျပႏိုင္ဘူးတဲ့။ ဒီေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈလဲ မစေသးဘူး၊ စိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတာမ်ိဳး မေျပာႏိုင္တဲ့ အဆင့္ျဖစ္ေနေသးတယ္။
Moderna ကေတာ့ ၂၀၂၁ ထဲမွာ US မွာထားတဲ့ ေအာ္ဒါကိုပဲ ထုတ္ႏိုင္မယ္တဲ့။ ေအးေရာ က်န္တဲ့သူ ဘယ္သူမွ မေရာင္းႏိုင္ေသးဘူး လိုခ်င္ရင္ ၂၀၂၂ အေစာဆုံးပဲဆိုတဲ့ သေဘာ။ Pfizer ကေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈဘာညာ မေျပာေတာ့ဘူး။ အႏုတ္ ၇၀ ဒီဂရီမွာထားရမယ္ဆိုတာနဲ႔တင္ ကိုယ္ေတြနဲ႔ ေဝးၿပီရယ္။ မေဝးဘူး ဝယ္မယ္ဆိုလဲ ၂၀၂၁ မွာ မရႏိုင္ဘူး။ ၂၀၂၂ မွာေတာင္ ဝယ္ထားၿပီးသား တန္းစီဇယားနဲ႔ျပည့္ေနတယ္လို႔ဆိုတယ္။
႐ုရွားက Sputnik V ကိုၾကည့္မလား၊ ဒီႏွစ္ကုန္ သန္း ၃၀ ထုတ္ႏိုင္မယ္ဘာညာနဲ႔ အခု ၅ သန္းေတာင္ မထြက္လို႔ သူ႔ဟာသူတိုင္ပတ္ေနတုန္း။ အားကိုးစရာ တ႐ုတ္ေဆး Sinopharm ပဲက်န္မလားပဲ။ ဒါလဲ ခုထိ မဝယ္ရေသးပါဘူး။ ၂၀၂၁ အကုန္မွာ သန္း ၆၀၀ ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းမယ္ဆိုလား။ ေဈးေရာင္းတယ္ဆိုတာ အရင္ဝယ္သူ အရင္ေပးမွာပဲ။ ဝိုင္းလုလို႔ေတာင္ ေလာက္မယ္မထင္ဘူး။
အိႏၵိယက ေဆး ၁ ဘီလ်ံထုတ္မယ္ဆိုတာက Astrazeneca က approve ျဖစ္မွ ဆိုေတာ့ ထည့္ကိုမတြက္နဲ႔အုံး။ ဘယ္ေနမွန္း မသိေသးဘူးရယ္။
ျမန္မာကဝယ္တာလား။ ခုထိဘယ္မွ မဝယ္ရေသးဘူး၊ ဝယ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္ လို႔ပဲ ေျပာသြားတာရယ္။ ပိုက္ဆံထုတ္ႀကီးကိုင္ၿပီး လိုက္ဝယ္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ေတာင္ လိုခ်င္သေလာက္ ဝယ္မရလို႔ တိုင္ပတ္ေနတယ္ ၾကားတယ္။ ၂၀ % ရမယ္ ၄၀% ရမယ္ဆိုတာႀကီး ေျပာထားတဲ့သူေတြကို ဘုတ္အုတ္ႀကီးနဲ႔ မွတ္ထားလိုက္ၾက။
Previous post ပုရိသတွေ မနေနိုင်လောက် အောင် အသဲယား စရာကောင်းနေ တဲ့ မေပန်းချီ ရဲ့ ဗီဒီယို လေး များ
Next post ရင်နှစ်မွှာကို အထင်းသား ပေါ်လွင်အောင် မိလွန်း နေတဲ့ ဆွေဇင်ထက်